Rakhine State – democracy for burma
#ရခိုင်ပြည်နယ် ရောက်ရ #Suu #Kyi #arrives in #Thandwe for #election #campaign #speech
On October 16, 2015 October 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn AUNG SAN SUU KYI, တန်းတူညီမျှရမယ့် Federal ဆီ၊, Burma, ELECTION CAMPAIGN, MYANMAR, NLD, RAKHINE STATELeaveacomment
Suu Kyi arrives in Thandwe for election campaign speech Aung San Suu Kyi, the chairperson of National League for Democracy, has arrived in Thandwe, Rakhine State, at 12:30 pm today. She is on her way to Toungup to rally.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုဆိုဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုအား အများက စိတ်ဝင်စား ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ သံတွဲလေဆိပ်တွင် လူငယ်အချို့ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုမှာ အများက စိတ်ဝင်တစားရှိနေပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်သူ များပြားနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းဆိုင်ဘုတ်တွင် ရေးသားထားသော စာမှာ “ကမ္ဘာကျော် လူထု ခေါင်းဆောင်အား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏” ဟု ပါရှိပြီးအောက်တွင် ရခိုင်ပြည်မှာ ANP ၊ တန်းတူညီမျှရမယ့် Federal ဆီ၊ အားလုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ အစိုးရက NLD ဟု ရေးသားထားသည်ဟု သိရသည်။ ( ဓာတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ) Arakan National Network (ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ုရက်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရခိုင်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၆)ရက် စာအမှတ်။ ။ ၂/ ၂၀၁၅ ကွဲပြားစရာ အကြောင်းအရာများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာဂုဏ်သိက္ခာအရ အိမ်ရှင်မှဧည့်သည်အပေါ် ဧည့်ဝတ်တရားကျေပွန်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ရခိုင်ပြည်ခရီးစဉ်အား ကျန်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး နှင့်အတူ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြိုဆိုပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း NLDပါတီစည်းရုံးရေးကိစ္စများအပြင် ရခိုင်ပြည်သူတို့လက်ရှိခံစားနေရသော လူမှုဒုက္ခအဖုံဖုံကို လက်တွေ့ခံစားသိမြင်လာပြီး နောင်အနာဂတ်ကာလ၌ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ဘက်မှ ပိုမိုရပ် တည်ရုန်းကန်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မျှော်လင့်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆိုပါမျှော်လင့်မှုသည် ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLDပါတီ၏ ရိုးသားပြီးရှင်းလင်းတိကျသော သဘောထားများ၊ နိုင်ငံရေးအရတည်ကြည်မှုနှင့် အ ပြန်အလှန်ယုံကြည်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့ကသာ ကျွန်ုပ် တို့အားလုံး၏အနာဂတ်ကို ပိုမိုလှပစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရခိုင်ပြည်ခရီးစဉ် အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။ ။ ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်(ANN)။
On November 19, 2014 November 19, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
ထိုင်းနိုင်ငံနခေါ်စိန်ဌါမရ စိန်ချွန်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာမိသားစုတစုအား ထိုင်းနိုင်ငံသာတဦးမှာမအေးဖြစ်သူကိုလည်ပင်လှီးသတ်ပီး သမီးဖြစ်သူကိုမုဒိန်းကျင့်ရန်ကြံစည်ပီး ယ္ခုလက်ရှိအချိန်တွင် သမီးဖြစ်သူစိန်ချွန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသခံယူနေရသည်
#BURMA #30 #people in #Rakhine #State #over #suspected #links to #terrorist #groups #interrogated
On October 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
29/10/2014 Police and military personnel have interrogated 30 people in Rakhine State over suspected links to terrorist groups since the leader of Al Qaeda announced in September that the once-feared group had formedanew unit to target India, Bangladesh and Myanmar, local police said.
They did not name the terrorist organisations the suspects were allegedly linked to, but said special investigation teams were seeking information on the movements of the unidentified groups and that security forces along the border had been alerted about this.
The special investigation teams comprise members of Special Branch and the Special Bureau of Investigation. They have, or are in the process of, opening offices in Maungdaw town, as well as several villages in the predominantly Muslim township: Ahle Than Kyaw, Bandula, Khamauk Seik, Kyein Chaung and Taungphyo Letwe.
Local police have also been alerted that emergency security services are being imposed.
The teams have yet to engage in combat with the unidentified terrorist group, or groups, but are seeking information on their alleged movements, local police said.
An officer from Special Branch said Rakhine State was in an emergency situation. He also said branch offices would be opened across the entire state and that they were similar to units that had been in place during military rule.
The expansion of security forces over the state is being portrayed asaresponse to the video released on September3in which Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri claimed that the terrorist group had formedaunit to launchajihad on India, Myanmar and Bangladesh. The claim was widely interpreted as an effort by the nearly decimated terrorist organisation to regain the extremist spotlight, which it lost to terror group Islamic State, which is at war in Syria and Iraq.
Though no data has been released, local police say the crime rate in the Maungdaw border area has risen, with robberies and kidnapping cases becoming more common. They also allege that ethnic Rakhine residents of the area – who areaminority in the two northern districts of the state – are also being threatened by terrorists.The new security teams are reportedly attempting to gather evidence of terrorist activities.
Myanmar is also cooperating with other governments in the region and around the globe to prevent terrorist attacks by Al Qaeda through an early warning system and the sharing of information on the group’s activities. CR. ELEVEN MEDIA